ဆြာ ကြောင်ဂျီး သို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ဆြာ ကြောင်ဂျီး သို့
ဆြာ ကြောင်ဂျီး သို့
Posted by မြစပဲရိုး on Jul 13, 2015 in Ideas & Plans | 26 comments
. ကြောင် တော့ ကြောင်ပြီးရင်း ကြောင် နေပါတော့လား ကွဲ့။
မမြင်နိုင်ရင်၊ မသိနိုင်ရင်၊ မတွေးနိုင်ရင် လဲ အစ်မတို့ ဝတ္တရား နဲ့ အညီ ပြောပါ့မယ်။
နိ ကို ဘယ်လို တရာ ပေး ရမယ် စဉ်းစားရ တာ နည်းပေါင်းစုံ တော့ မယ်။
လျှပ်စစ်မီးလုံး တီထွင် လိုက်ဖို့ အိုင်ဒီယာ အတွက် သောမတ်စ်အက်ဒီဆင် နှစ်ယောက် မလိုဘူး။
ပီစီ သုံးနိုင်ဖို့ အိုင်ဒီယာ အတွက် ဘီလ်ဂိတ်စ် နှစ်ယောက် မလိုဘူး။
မက်ကင်းတော့ခ်ျ ဖြစ်လာဖို့ အိုင်ဒီယာ အတွက် စတိဗ်ဂျော့ဘ် နှစ်ယောက် မလိုဘူး။
ဒါ့အပြင် အခု လက်တွေ့ဘဲ မြင်ရသား။
. သောမတ်စ်အက်ဒီဆင် နောက်တစ်ယောက် မထွက် နိုင်လို့ ဒီ မီးလုံး တွေ ဘဲ သုံးနေဆဲ။
. ဘီလ်ဂိတ်စ် နောက်တစ်ယောက် မထွက် နိုင်လို့ ဒီ ပီစီ ပြူတင်းပေါက် တွေ နဲ့ဘဲ နှစ်ပါးသွား နေဆဲ။
. စတိဗ်ဂျော့ဘ် နောက်တစ်ယောက် မထွက် နိုင်လို့ ဒီ ပန်းသီး တွေ နဲ့ ဘဲ ရှိုးပြ ကြွားလုံး ထုတ် နေဆဲ။
. မြန်မာပြည် က ဖောက်ပြား မဲ့ လူ တွေ ကို ထိန်းဖို့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကောင်း တစ်ခု အစစ် အမှန် ထွန်းကား နိုင်ဖို့ အိုင်ဒီယာ အတွက် အောင်ဆန်းစုကြည် နှစ်ယောက် မလိုဘူး။
. လောလောဆယ် ” အောင်ဆန်းစုကြည်” တစ်ယောက် နဲ့ လုံလောက်တယ်။
. သူလို လူမျိုး နောက်တစ်ယောက် လဲ ဒီ တစ်သက် ဘယ်တော့ မှ မရ တော့ဘူး။
ကိုယ်လဲ မစွမ်း ဘဲ နဲ့၊ ဘယ်သူမှ လဲ သူ့လောက် မထက်မြက်ကြ ဘဲ နဲ့ –င်ဂေါင်း သိပ်ပွ မနေကြ နဲ့။
ကိုယ့် အကြောင်းလဲ ကိုယ် သိကြ။
ကိုယ့်ဟာကို တစ်ယောက်ထဲ တောင် နှစ်ယောက် ကွဲ ပြီး နေနေကြတဲ့ လူ တွေ က။
သူရှိတုန်း ကို ကိုယ့်တိုင်း ကိုယ့်ပြည်အကျိုး ရှိ အောင် သုံးနိုင်ကြဖို့လိုတယ်။
သူ့ နောက်မှာ သူ့ အတွက် စွမ်းအားကောင်းကောင်း ယုံကြည်မှု အပြည့် နဲ့ ပံ့ပိုးပေးဖို့ ဘဲ လိုတယ်။
Follow the leader ဆိုတာ ကို သာ လက်ကိုင်ထားကြ။
နိ ကို တရာပြ ရရင်း ကျုပ်လဲ တရာ (နှစ်ခါ) ရခဲ့လေပြီ။
ဖတ်လို့ ကောင်းပြီး ဟုတ်သလိုလိုတော့ ရှိသား…
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း ဟုတ်လား ဆိုတော့လည်း မဟုတ်သလိုလိုပဲ….။
အယ်ဒီဆင် – မီးလုံး
ဘီလ်ဂိတ်စ် – ပီစီ
စတိဗ်ဂျော့စ့် – မက်ကင်းတော့ခ်ျ မှာ … တယောက်ပဲလိုတယ် ၂ယောက်မလိုဘူးဆိုတာက ဟိဟိ။
အယ်ဒီဆင် ဝေးထူ မီးလုံး
စတိဗ်ဂျော့စ့် ဝေးထူ ပန်းသီးပဲ့ မှာ
တယောက်စီပဲ လိုပေမယ့် သူတို့ မသေခင် သူတို့ လက်မလွှဲခင် ကတည်းက
လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ဖို့အတွက် နောက်လိုက်ကောင်းတွေ ရှိခဲ့ လိုခဲ့ တာအမှန်။
သူတို့မရှိလည်း သူတို့ ရဲ့ someone’s way to something ကို ထားခဲ့လို့
ကနေ့ထိ အောင်မြင်တုန်း သုံးနေရတုံး အရှိန်ဟုန်ကောင်းတုန်းရယ်ပါ။ တနည်း
ပိုတောင်ကောင်းလာသေးတာရယ်ပါ။ သူတို့ ရှာဖွေ့တွေ့ရှိသမျှကို နှောင်းလူဆီ လက်ဆင့်ကမ်း သင်ကြားပျိုးထောင်ခဲ့လို့ပဲပေါ့။
ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာ (ဆက်ခံသူ) နှောင်းလူတွေက ပိုတော်လို့မဟုတ်။
ရှေးလူက nothing ထဲကနေ something ကို ဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီး ဆွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ something ကို
better thing ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ကြလို့… ပိုကောင်း ပိုမြန် ပိုသက်သာ လာတယ်မဟုတ်ပါလား။
နောက်တချက် အယ်ဒီဆင်ကတော့ ဝေးလို့ ထား။
ဂိတ်စ့် က ရှိသမျှ ပီစီရဲ့ အပျော့ထည် ဌာနတိုင်း ကိုင်ခဲ့တာမဟုတ်သလို
ဂျော့ဘ်စ့် လည်း အလားတူ ပါ။ ဘယ်အပိုင်းဆိုရင်တော့ ထိပ်ဆုံးတာဝန်ရှိသူ ပေါ်လစီချမှတ်သူ ဟာ
ဘယ်သူဆိုတာ အတိအကျ ကလိယား ဖြစ်ပြီးသား။ သူတို့ကိုယ်တိုင် ကိုင်ခဲ့တဲ့ ဌာနတွေမှာလည်း
သူတို့ ယနေ့ လေယာဉ်ပျက်ကျရင် မနက်ဖြန် စနိုက်ပါစာမိရင် ဆက်လက် ဦးဆောင်လည်ပတ်နိုင်မယ့်
နံပါတ်နှစ် တွေလည်း အသီးသီး ရှိပြီးသား။လူကိုတည်ပြီး ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ အုတ်မြစ်မဟုတ်။
ဘွားတော်ကို လေးစားတယ် ကြည်ညိုတယ် ထောက်ခံတယ်။ ဒါကတပိုင်း။
နိုင်မယ် နံပါတ်တစ်တော့ သူမဖြစ်နိုင်ဆိုတာလည်း တပိုင်း။ (ဖြစ်သွားပစေဦးတော့)
ဘွားတော် ခေတ်လွန် ပလန် ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာကြီးက တပိုင်းပဲ။
တခေါင်းထဲနဲ့တော့ နယ်ပယ်စုံ ဆြာကျဖို့ မဖြစ်နိုင်။ ဘယ်နယ်ပယ်ဆို ဘယ်သူဟေ့ ဘယ်သူကွ
ဆိုတာ မမြင်ရ မကြားရတာ သိပ် စိတ်ထိခိယက်ဖို့ ကောင်းလယ်။
အပေါ်က ဘိုးတော်ကြီးတွေလို ရော Suu’s Way to Democracy ဆိုတာကြီးကို မျိုးဆက်သစ်တွေကို
အကျအန လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလား.. ။ (လက်ဆင့်ကမ်းမယ့် ဘယ်သူ ဘယ်ဝါကိုတော့ လျာထားပါတယ်
ဆိုတဲ့ ရှော့လစ် လေးရော ကြားရပြီလား)
ဒါတောင်နော်… ဆက်ခံသူ စာရင်းပဲရှိသေး။ သူ့ခေတ်လွန်မှာ မကွဲအောင် မပြဲအောင် ဘယ်လို ဆက်သွားမယ် ဆိုတဲ့
မူဝါဒရော မြင်ရပြီလား။ ၂ယောက်ရှိ ၃ဖွဲ့ကွဲတဲ့ ဘားမန်း စရိုက်နဲ့ သူမရှိတော့ရင် ဆိုတာက ပူစရာကြီး။
ဘားမန်း စရိုက်ဆိုလို့ ကျုပ်တို့လူမျိုးက တယ် သွေးပူ သွေးဆူ လွယ်သကိုး..။
အရီးပြောပြောနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို ကျောချင်းကပ်ကြ ဆိုတာအပြင်..
နာမည်ကျော်တွေ တတ်သိပညာရှင်တွေ ၀န်းရံကြ ဆိုတာက မြင်တွေ့ကြားသိသလောက်တော့
အားလုံးနီးပါး အေးဆေး ဖြစ်နေတာပါပဲ။ ကြားဖြတ်တုန်းက နှလုံးသွေးပွက်ပွက် ဆူခဲ့တဲ့ စပျစ်သီး အတော်များများ
အခုကျတော့လည်း သူတို့မဟုတ်သလို…။ အစမ်းစာမေးပွဲမှာ အမှတ်ပြည့်နီးပါးရတာနဲ့ မာန်တက်ပြီး အစင်ကြီးမှာ
သူ့လောက်မစွမ်းဘဲ မထက်မြက်ဘဲ မဝေဖန်ကြေး မပြောကြေး ဆိုတာကတော့ လက်မခံပါ။
ကိုယ်အားပေးထောက်ခံတဲ့/မယ့် မဲပေးတဲ့/မယ့် အဖွဲ့အစည်း ကို မမှန်ဘူး လွဲတယ်လို့ ကိုယ်ထင်မြင်ယူဆတာကိုမှ
ပြောခွင့်မရရင် အာနာရှင်စနစ်နဲ့ ဘာထူးဦးမလဲ။ အားလုံး လိုချင်တာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်၊ သာတူညီမျှရေး ၊ အာနာရှင်စနစ်
နိဂျုံးခုပ်ရေးပဲမလား။ ဆင်ချေးတုံး ဆပ်ပြာ မကြိုက်လို့ မွှေးဆပ်ပြာ သုံးတယ်။ ထင်သလောက်မစွံတဲ့အခါ … မမိုက်ပါဘူးကွာ
တောင် ပြောလို့ မရရအောင်… ဒါ တံခါးပိတ်ထားတဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်လည်းမဟုတ်။
အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ က ကိုယ့်ကို ထောက်ခံတဲ့/မယ့် လူတွေ ဘာတွေ စိုးရိမ် စိတ်ပူနေလဲ ဘာတွေ မနှစ်သက်ဖြစ်နေသလဲ
လေ့လာ စုံစမ်း စုစည်းပြီး reaction လုပ်ဖို့ပဲ လိုတာ။ ဒါမှ လူထုနဲ့ ပိုနီးစပ်မယ်။
ဒါတောင် leader class ပဲရှိသေးတာ။ middle class နဲ့ တကယ်တမ်း အောက်ခြေမှာ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအဆင့် လူထုနဲ့
ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ အခြားအဆင့်တွေ ကျန်သေးတယ်။
အချုပ်အနေနဲ့ကတော့ ဒါတွေပြောလို့ ဟိုဘီးကျဲတွေ ဘက် ဒိုးမယ် မဆိုလိုပါ။
သူ့ကိုပဲ ရွေးမယ် ထောက်ခံမယ် အဲ… စိတ်ထဲ မရှင်းတာရှိလည်း ပြောအုံးရေးအုံးမယ်။
ခုတလော ဟော့နေတဲ့ အူးအောင်တောင်း ကိစ္စနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပမယ်
အူးအောင်တောင်း တေရင် သူ့ဆွေမျိုးအတွက် အုပ်စာ ပစ္စည်းချန်သွားနိုင်ခဲ့သလို
ဘွားတော် တေရင်လည်း သူ့ အဖွဲ့အစည်းအတွက် (လူထုအတွက်) စု ဝေးစ့် ထူ ဒမော့ခရက်စီ ဆိုတာကြီး
စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ လစ်ဘရယ် ယောက်ျား။
ဒီတစ်ခါ စာထဲမှာ ပါတဲ့ အတွေးအခေါ် အသုံးအနှုံး တစ်ချို့ က မနာလို ဖြစ်လိုက်မိ တဲ့ အထိ မြင့်ပါတယ်။
အသေအချာဝင်ပြီး ဆွေးနွေးပေးထားလို့ ကျေးဇူးပါ။
Thomas Edison Way၊ Bill Gates Way ၊ Steve Jobs Way & Suu Kyi Way .. :-))))
. လောလောဆယ် Suu Kyi Way ကို ပထမဆုံး လူပြိန်းကြည့် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ကြည့် ရင်
သူ့ရဲ့ ဝတ်စား ဆင်ယဉ် မှု မှာ မြင်နိုင်မယ်။
သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေယူ လေသိမ်း အပြင် မျက်နှာ ဟန်ပန်၊ စကား အသုံးအနှုံး တွေ မှာ မြင်နိုင်မယ်။
သူ့ရဲ့ အတွေးအခေါ် စိတ်နေစိတ်ထား ကို သူရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ မှာ မြင်နိုင်မယ်။
သူ့ရဲ့ စေတနာ နဲ့ ပညာဉာဏ် ကို သူ့လုပ်ရပ် တွေမှာ မြင်နိုင်မယ်။
သူ့ ရဲ့ Way တွေထဲ မှာ အကြိုက်ဆုံး ကတော့ တစ်ခုခု ကို အသေစွဲကိုင်မထားဘဲ အခြေအနေ ကို ကြည့်ပြီး နည်းဗျူဟာ ကို ပြောင်းတတ်ခြင်းဘဲ။
ဒါမျိုး က မလုပ်တတ်ရင် ဗြဲလရမ်း နဲ့ အားလုံး ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်သွားမှာ။
ဒါပေမဲ့ သူ့လက်ထဲမှာ အားလုံး က စနစ်တကျ နဲ့ လိုရာ ကို တစ်ချက်ခြင်း ဖြေးဖြေး ထိ နေတယ်လို့ ထင်တယ်။
, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နားမှာ လူငယ် လူတော်တွေ မရှိဘူး …
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က လူငယ် တွေ ကို လုပ်ခွင့် မပေးဘဲ၊ စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ခွင့် မပေးဘဲ သူ့စိတ် နဲ့ချည်း လုပ်နေတယ် ….
လို့ ဘယ်သူ က ပြောတာလဲ။
ဘာကို သိလို့ ပြောတာလဲ။
, ကြောင် တစ်ကောင် ဝင်ဝင် ရိုးစွပ် နေတာ အတွင်း ကိုဘယ်လောက် သိလို့ လဲ။
ဒါတွေ ကို သိချင်ရင် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း အကြောင်း နဲ့ ဘယ်သူတွေ နောက်မှာ ရှိနေတယ် ဆိုတာ လေး အရင် စူးစမ်း ကြည့်လိုက်ပါ။
သူကြီး တောင် အဲဒီ အသိုင်းအဝိုင်း ကို သိတယ်ပြောပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဆက်နွယ် နေပုံ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပံ့ပိုးနေပုံ တွေ ကို သိပုံမရ။
ဒါက အသေးနမူနာဘဲ နော်။
ဒါထက် များ တဲ့ လူငယ် ခြေတက် ပညာ တတ် တွေ အနားမှာ အများကြီး ကိုယ်ရောင်ဖျောက် နေကြတယ်။
ဘယ်သူမှ အင်တာနက် ထဲ လေတိုက်ပွဲ တွေ နဲ့ အာမနေ ကြဘူး။
အဲဒီထဲ မှာ ကျောင်းက အရင်းနှီးဆုံး အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အနီးကပ်ပါနေတယ်။
အလုပ်လုပ်တာ မှ သူ့ဘဝ ကို အဲဒီမှာ မြှပ်ထားတာ။ သူ့ အကျိုးမပါ။
ပြီး ခဲ့တဲ့ လ ကဘဲ ပြင်ပ မှာ တက္ကသိုလ် ဆရာမ လုပ်ပြီး အဲဒီမှာ အတော်လေး နာမည်ရနေတဲ့ သူငယ်ချင်းညီမလေး မြန်မာပြည် ကို အပြီးပြန်သွားတယ်။
အဲဒီမှာ မိဘမဲ့ ကလေး တွေ ကျောင်းမှာ နိုင်ငံခြား က နည်းတွေ သုံးလို့ စာသင်နေပြီ။
အတော်လေး အားကျ နေမိတယ်။
ဒါမျိုး Real Model တွေ မြန်မာပြည် ထဲ မှာ အများကြီး ရှိနေသလို အများကြီး လဲ လိုနေဆဲ။
အရေးကြီး တာ က လူ ကိုလူချင်း ဂါရဝတရား ထားရမယ်၊ လေးစားတတ်ရမယ်၊ ဆိုတာ သိဖို့ဘဲ။
ဒီလို သိရင် အတွင်းက လူ နဲ့ အပြင်ကလူ စည်းစည်းလုံးလုံး ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင် ရောက်အောင် လက်တွဲ လုပ်နိုင်မယ်။
သူတို့ ဘယ်သူမှ ငါတို့ ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာ လေကြီး မနေကြဘူး။ လေနဲ့ ဟန်လုပ်တာ အခု ဖွတ်အစိုးရ နဲ့ သူ့လူ တွေဘဲ လုပ်တာ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလုပ်လဲ တဲ့။
သူဘာမှ မလုပ်ပါဘူး။ (သူ့နာမည် ပေါ်အောင်လို့)
အခု ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ Management စွမ်းအား နဲ့ တိုင်းပြည် ထူထောင်နည်း တစ်စ ကို တစ်ရစ်စီ မြင်လို့ရ နေပြီ။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး သတင်း ကို တကယ်လုပ်သူက အပိုလုပ် လေထွား မနေဘူး။
ဒါကို ကြား က အရှက်မရှိ ဝင် ပဏာယူ နေတာ မြင်ကြ၊ ကြားကြ တယ် မဟုတ်လား။
ဒါတောင် သူ့မှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ကို ထိခွင့်ရသူ မဟုတ်ဘူး။
တရုတ် ရောက်တဲ့ နေ့ဘဲ စစ်ပွဲ ရပ်တယ်။
အရှက်မရှိ ကြွေးကြော် ကြသေးတယ်။
သူတို့ က အားသာသွားလို့ တဲ့။ ဟာ ဟာ ဟ။ (မပြောတော့ဘူး)
စနစ်ကောင်း လေး နဲ့ စစ်မှန် တဲ့ ပြည်သူ့ ဥပဒေ တွေသာ တည်၊ လူ တွေ ကို စနစ် က ထိန်းသွားလိမ့်မယ်။
အဲဒီချိန်ကျရင်လေ စနစ်ကောင်း အတွက် လို တဲ့ “အရာရာ ကို စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံ ထားရ တဲ့ လူကောင်း” အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်တယောက် မလိုတော့ဘူး။
သူ့နည်း သူ့ဟန် နဲ့ တော်သူတွေ လဲ အဲဒီ စနစ် ထဲ သူ့ဟာ သူ ကို ထွက်ထွက် လာလိမ့်မယ်။
အခုချိန်မှာ ကြောက်လို့ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ပျောက်နေကြတာ။
တကယ်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သာ အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်ခွင့်ရ။
. ပြည်ပ ကနေ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဝင်ကူ ပေးချင်သူ တွေ မှ အပုံ အပင်။
တကယ်တော့ ဂျပန် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဂျပန်လူထု ကပါချစ်တာ မင်းလဲ အသိပါ။
ဂျပန်အစိုးရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို လူမျိုးခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရ နဲ့ ပိုပြီး အလုပ်လုပ်ချင်မှာ မြေကြီး လက်ခတ်မလွဲ။
. ဗြိတိသျှ တွေ ကတော့ ပြောမနေ နဲ့။
နာမည်ကြီး ကျောင်း တွေ ရဲ့ စကော်လာ တွေ၊ အကူအညီ တွေ နန်းချင်း လာလိမ့်မယ်။
. ပြည်ပ အားမကိုး ဘူး လို့ သောက်ကြီးသောက်ကျယ် ပြောနေတာ ကြားရင် အော်ဂလီဆန်တယ်။
. မလိုဘဲ နေမလားကွယ်။
ဒီလောက် ပြတ်ကျန်နေခဲ့တာ။ နလန်ထနိုင်ဖို့ ကိုတောင် အားများများ နဲ့ ဆွဲ ယူရမယ်။
ဒီလိုမျိုး ပြည်ပ နဲ့ ဒဲ့တွေ့ပြီး ဟိုတွေက အထင်တကြီး လုပ်ပေးချင်တာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မို့ ဘဲ။
အဲဒီလို ရမဲ့ အား တွေ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ နောက်မှာ အများကြီး ရပ်နေကြတယ်။
ဒါကြောင့် ပြောတာလေ။ ပွဲ ထဲ မှာ သူ့ ကို ဖြုတ်ထားကြည့်ပေါ့။
တိုင်းပြည် က မြောက်ကိုရီးယား ထက် ဆိုးမသွားရင်ကံကောင်း။
အခု လောလောဆယ် သူရှိနေလို့ သူ့ ကို အားလုံး ကာဗာ ယူပြီး ရှေ့ ကိုတိုးလာနိုင်ကြတာ။
စီးပွါးရေးသမား တွေလဲ တကယ် ဆို ကျေးဇူးသိဖို့ ကောင်းတယ်။
သူ့ ရဲ့ တစ်ချက် အလျှော့ မှာ နိုင်ငံ ရဲ့ ပုံစံ ပွင့်ပြီး ပြောင်းသွားတာ ကို။
သဘောထား သေးသိမ်သူ တစ်ယောက် သာဆို မင်းသားကြီး မဖြစ်ရချိန် ပတ်မကြီး ဖောက်တော့ မှာ။
ဒီ မိန်းမ က ဒီလို မဟုတ်။
အားလုံး ထင်တာ ထက်တောင် ပိုပြီး သဘောထားမြင့် နေတာ တွေ့နိုင်မယ်။
သူတင်မဲ့ လူ တွေ နဲ့ သူ တင်မဲ့ သမ္မတ ၊ အဲဒီ နောက်မှာ မှ သူနေနေမယ်။
သူ ထုတ်ပြန်လာမဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေ ကို အတော်လေး စိတ်ဝင်စားနေမိတာအမှန်ဘဲ။
. နောက် တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေ ကို မဟာမိတ်ဖွဲ့တာ။
ဒီအကြောင်း ကို အရီး တစ်ခါ က အဘနီ ပို့စ်မှာ ပြောခဲ့ပြီး။
တိုင်းရင်းသား တွေ ဘက်မှာ သူ့ လူ နဲ့ သူဘဲ ရှိစေချင်တယ်လို့။
ဒါမျိုး ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လို မိန်းမ မျိုးဘဲ ကိုင်တွယ် နိုင်မယ် လို့ ယုံတယ်။
သူ့လက်ထဲ စစ်ပွဲ တွေ ရပ်မယ် လို့ ယုံတယ်။
ဒါတွေ အားလုံးဟာ သူ့ ရဲ့ အတ္တမဲ့ ပြီး တိုင်းပြည် လူထု ကို ချစ်တဲ့ စိတ် ကို ပြနေတယ်။
ဒါတွေ အားလုံးဟာ အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ ကို ပြနေတယ်။
သေချာတာ က ဒီ ရက် ထဲ သူ့ကို ပိုပိုပြီးကြည်ညို လေးစားလာတာဘဲ။
သူသာ အာဏာရ ပါစေ။ ပြန်လာမယ်။
အဲဒီလို အမျိုးသမီးကြီး လက်အောက်မှာသာ လုပ်ရရင် .အောက်ခြေသိမ်းဘဲ လုပ်ရ လုပ်ရ ဘယ်သူမှ မလုပ်ချင်တဲ့ နေရာ တွေ မှာ ဝင်လုပ်ပေးမယ်။
ထမင်းလား။ နှစ်နပ် စားရ တော်ပြီ။
. နောက်ဘဝ ဖို့ လဲ သယ်စရာ ငွေကြေးလဲ မလို။
ကိုယ့်ပညာ တွေ ကို တကယ် လိုတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြန့်ပေးချင်တာ လိုရင်းဘဲ။
သူမဟုတ်ဘဲ ဖွတ်တွေဘဲ နေရာယူထားဦးမယ် ဆိုရင်တော့ ……
ဖွဟဲ့ လွဲစေ ဖယ်စေ။
သူကို ” မဝေဖန်ကြေး မပြောကြေး ” ဆိုတဲ့ တားဆီးချက်တော့ မလုပ်လိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခု မှာတော့ အဲဒီလို လုပ်ရမဲ့ အဆင့် က စောနေပါသေးတယ်။
သူအာဏာရချိန် ကျ တို့ တူဝရီး တွေ ပေါင်းပြီး အဲဒီ အမျိုးသမီးကြီး ရဲ့ Management အမှား တွေ ကို ရှာပြီးထောက်ပြ၊ ဝေဖန်ကြတာပေါ့။
အရမ်း အရမ်း အရမ်းကို ကောင်းတာပါပဲရှင် ………..
အလုံးစုံ သဘောတူ ထောက်ခံလို့ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွေကို အားကျပြီး ပြောရရင် ပါးစပ်ဆယ်ပေါက်ရှိတောင် ပြောလို့ မလောက်ပါဘူး။
လုပ်တဲ့သူတွေ ဘဝ အဆုံးသတ်ကို ကြည့်တယ်။
ဒို့ လေဒီကို ကြည့်လိုက်တယ်။
အောင်လံ မလဲကျန်သူ က ဘယ်သူဆိုတာ သိလို့ရပါပြီ။
ကိုယ့် အသက် သူ့ အသက် ရှည်သလောက် ဝန်းရံသွားမယ်။
သူ့ လက်ထဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်သာ ရောက်ပါစေ။
သူ့ လက် ထဲ ကို ပေးမဲ့ အကူအညီတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကွကိုယ် အသင့်ပြင်ထားတယ်။
မိန်းမ တစ်ယောက်ကို မနာလိုဖြစ်နေတဲ့ သကောင့်သား ကြီးလတ်ငယ်တွေတော့ စာရင်းထဲကို ထည့်မပြောချင်တာ။
ပြီးခဲ့တဲ့.. ၂လလောက်က.. စုဖောင်ဒေးရှင်းမြန်မာပြည်ဝင်တယ်..။
အဟမ်း.. ခရက်ဒစ်တော့ မယူချင်ပါဘူး..။
ဒါပေမယ့်.. မစ်ရှဲဗီဇာကိစ္စကအစ.. ကျုပ်က.. ခရက်ဒစ်ယူရမှာပဲ..။
စုဖေါင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌက.. မြန်မာ့ဂဇက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၇နှစ်ကတည်းကစာရေးနေတဲ့.. ကွန်ထရီဗျူတာတယောက်လို့.. ခရက်ဒစ်ယူရမှာပဲ..။
ဘာတွေပြောပြော.. ဒေါ်စုအားနည်းချက်တခုက.. အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေ မွေးယူတဲ့နေရာမှာလို့ပဲပြောချင်…။
အချိန်တော့မကျသေးယူဆသမို့.. သူအာဏာရအောင်.. အတင်းတွန်းတင်မလားလို့..
ခမြှားက တီတီလော်ဘမြီကို ကလံဒါလား… မခမ့်၎ဆားနဲ့…။ လူကြည့်ဒေါ့ ပုတ်သေးရမ်း..
မြန်မာမှာ လူဆင်းရဲ ၇၀ % ကိုလျော့ချနိုင်ဖို့။
ယူအက်စ်မှာ.. အိုဘားမားကို.. ဆိုရှယ်လစ်သမားလို့ခေါ်ကြတာ…။
အိုဘားမားနဲ့.. ဟီလာရီကလင်တန်နဲ့သဘောဆင်တယ်…။ ဒေါ်စုကသူတို့နဲ့ရင်းနှီးသလို.. အဲဒီသူတို့အတွေးအခေါ်..ပေါ်လစီလည်းကြိုက်ပုံရပါတယ်..။
ယူအက်စ်မှာဆင်းရဲသူနည်းတော့.. မစ်ဒယ်ကလပ်စ်ပေါ့.. ။ အိုဘားမားပေါ်လစီက.. တားဂက်ထားတာ..။
၂၀၁၆ ဟီလာရီကလင်တန်သမ္မတဖြစ်လို့ကတော့.. မြန်မာပြည်တော်တော်အပြောင်းမြန်.. တိုးတက်မြန်မယ်…။
ဒေါ်စုဆီမှာ လူတော် လူဖြောင့် တသောင်းလောက်
မနောက်ပါနဲ့ ကိုမင်းလေး ရယ်။
ဈေးကွက်စီပွါးရေး ခေတ်ကြီးထဲ ဝေစားမျှစား မရှိ အတူ ရှိအတူ ဆိုတာ အလုပ်ဖြစ်တော့ မှာ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။
ပညာရှိတဲ့ လူသားဆန်တဲ့ အရင်းရှင် တွေ များဖို့ ကိုဘဲ လုပ်ပါ။
ဆင်းရဲသား ဆိုတာ ပပျောက်ပါတယ်။
ဒါမျိုး ကတော့ ဘောဂဗေဒဆရာကြီး များ (အမြင်ကြည်သူများ) က ကိုယ့်တိုင်းပြည် အခြေအနေ နဲ့ ယှဉ်ထိုးကြည့်ပြီး တော့ နားလည်မှာပါ။
ကျွန်မ ကတော့ ဒီနေရာမှာ လဲ ကွန်တစ် စစ်စစ်ကြီးပါဘဲ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရချိန် အသံဝဲ နေသူ တွေ လဲ အသံပြန်ကောင်းသွားကြ မယ် လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
တကယ်ဖြစ် မဖြစ်ကတော့ တိုင်းပြည် ကံ လို့ ဘဲ ဆိုပါစို့။
us လို အခြေကြီးတဲ့နေရာမှာတောင်
ရန်ကုန်မှာ တရက်ကို ၃၆၀၀/-သတ်မှတ်လို့
မြန်မာလို အစစ ပြတ်လပ်နေတဲ့ နိုင်ငံမျိူးမှာ
သွားနိုင်မှ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို မြင်ရမှာပါ။
ယူအက်စ် ဆင်းရဲသားနဲ့တော့ .. မြန်မာကသိပ်နှိုင်းလို့မရ…။
တလ ဒေါ်လာ၁ထောင်ဝင်ရင်..ဆင်းရဲသားသတ်မှတ်ပြီး.. အစိုးရကထောက်ပံ့ငွေအပါအ၀င်.. အစားအသောက်ဝယ်ဖို့လက်မှတ်တွေဝင်ဖြည့်ပေးတော့ကာ.. မဟုတ်ပဲလုပ်နေသူတွေအများသား..။
Poverty thresholds are determined by the US government, and vary according to the size ofafamily, and ages of the members. In 2013, the poverty threshold—known more commonly as the poverty line—for an individual was $11,888. For two people, the weighted average threshold was $15,142.
Three people: $18,552
Four people: $23,834
Five people: $28,268
Six people: $31,925
Seven people: $36,384
Eight people: $40,484
Nine or more people: $48,065
မြန်မာ့အထွာနဲ့ usအထွာ နှိုင်းလို့မရပေမဲ့
us အထွာနဲ့ မြန်မာကိုထွာကြည့်ရင်
၁၀၀ မှာ ၉၉ ယောက်များစာရင်းဝင်သွားမလားပဲ။
us က ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှာ
မြန်မာလူထုကတော့ နှစ်၁၀၀ မပြော ၁နှစ်အတွင်း us နီးပါး မျော်လင့်နေပုံ
က ၂၀၁၅-၂၀၂၀ အစိုးရ (အထူးသဖြင့် ဒေါ်စုအစိုးရ) အတွက် နိုင်ငံရေးဖိအား
US ရဲ့ နိုင်ငံရေးခရီးက.. နှစ်၂၂၀ကျော်..။ ပြည်တွင်းစစ်ပြီးခဲ့တာက.. ၁၅၀ကျော်…။
ကိုမင်းခန့်ကျော် ရဲ့ ဆိုရှယ်လစ် ပုံစံ ဖြစ်ချင်တာ ခေါင်းထဲ ရောက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ်။
အဲဒီ အကြောင်း လိုမျိုးတွေ စဉ်းစားဖို့ မြန်မာပြည် မှာ အချိန်တော့ကျ နေပါပြီ။
မဟုတ်ရင်တော့ အရင်းရှင်စနစ် လို့ ပြောမရတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ ခရိုနီစနစ် နဲ့ ဘဲ နှစ်ပါး ဆက်သွားရမှာပါ။
ဆိုရှယ်လစ် လို့ ပြောနဲ့ “ပြည်သူပိုင်” လို့ ဘဲ မြင်ကြမှာပါ။
ဦးနေဝင်းလက်ထက် ပြည်သူပိုင် သိမ်းလိုက်တာ သောက်သောက်လဲ။
အဖိုး အဖွား ဆန်စက်၊ ဆီစက် အားလုံးပါ။
စစ်ပြန်စစ်မှုဟောင်းထမ်း များ အကျိုး အတွက် နေရာတိုင်း သူတို့ အတွက် အကွက်ဖော်ပေးရင်း တိုင်းပြည် က ချွတ်ချုံ ကျခဲ့တာ သမိုင်းထဲ လက်လမ်းမှီ ပါသေးရဲ့။
ထားပါ။ ဘာစနစ် နဲ့ ဘဲ လုပ်လုပ်။ တိုင်းပြည် ကြီးပွါးမယ် ဆို အရေးမကြီးပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့ ခေါ်နိုင်တဲ့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ရဲ့ မူဝါဒ များ ကို လက်တွေ့မှာ အကောင်အထည် ဖော်မဲ့ လူများ က မသန့်စင် လေတော့ စနစ်ကြီး ပါ မဲညစ်ခဲ့ပေါ့။
၁၉၈၈ အလွန် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ပျက်သုံးပြီး ကျွန်မတို့ ဘာစနစ် ရခဲ့ လဲ။
အရင်းရှင်စနစ် လား။ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် အလွန် နိုင်ငံတော် ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် တွေ ကို နီးစပ်ရာ လူတစ်စု က လက်ပြောင်း ယူပြီး အကျိုးစီးပွါးများ ကို သူတို့ အပိုင် လုပ်ခဲ့တာ ပါ။
ဒါဟာ ပုဂ္ဂလိက လုပ်လိုက်တာ ပေမဲ့ လုပ်ငန်း တွေ ကို ဈေးကွက် အပြိုင် စနစ် ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ အာဏာပိုင်သူ စိတ်ကြိုက် လုပ်စတမ်း ပုံစံ ဖြစ်သွားတာပါ။
ဒါကြောင့်လဲ အာဏာပြုတ်ချိန် မှာ ပါ သွားတော့ မဲ့ အဲဒီ အခွင့်ထူး တွေ အတွက် ထို သူများ အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေခြင်းပါ။
သူတို့ ဥစ္စာစီးပွါးကို ကာကွယ်ဖို့ လက်ရှိ အာဏာ ကို မမြဲမြဲ အောင် အထက်လမ်း အောက်လမ်း နည်းမျိုးစုံ သုံး နေကြတာပါ။
ဒီကြားထဲ မှာ ကိုယ်လုပ် မှ ကိုယ်စား ရမယ် ဆိုသူ တွေ က လဲ အနားက အရိုးအရင်းကိုက်ပြီး စနစ် ပြောင်းသွားရင် သူတို့ အလွယ်ရနေတဲ့ လမ်း တွေ ပိတ်သွားမှာမို့ အော်နေတာပါ။
တကဲ့ ဆင်းရဲ သား တွေ ကတော့ နိုင်ငံရေး ကို ဘာဖြစ်နေမှန်း အသိ အသေအချာ မရှိတာပါ။ သူတို့ အတွက် က တော့ Change ဆိုတာ ကို ကြောက်စရာမရှိပါ။
ဒါထက် ငတ် ဖို့ မှ မရှိတော့ တာလေ။
ဒီအတွက် ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကနေ တီဗီ က နေ တရားဝင် မဲဆွယ် စကား ပြောလိုက်ရင် ကို ကိုယ့်ဘက် ပါ မှာပါ။
မသေချာတာ က Change ကို ကြောက် နေသူ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် တွေ ဘယ်လောက်များ နေလဲ ဆိုတာပါဘဲ။
ဒီအထဲ အစိုးရဝန်ထမ်း ထိပ်ပိုင်း တွေ၊ လက်ရှိ အစိုးရ နဲ့ အဆင်ပြေ နေသူ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပါနေတာကိုး။
ဒါတွေကြောင့် လက်ရှိ က ၈၈ လို အသေအချာ ပြောဖို့ ခက်သား။
ဒီ လူတန်းစား တွေ က အဓိ က ဆိုရင် ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ကို ရှေ့တန်းတင် တဲ့ ပေါ်လစီ တွေ သိပ်ထားမရဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဆေးရုံ တို့ ကျောင်းတို့ ကို အစိုးရ က ချုပ်ထားပြီး
စီးပွါးရေး အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ စက်ရုံ တွေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း တွေ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး တွေ ကို ပုဂ္ဂလိက ထားရင် ရနိုင်မယ်။
လောလောဆယ် UK မှာ လုပ် နေတဲ့ ပုံစံ ပေါ့။
Health & Education Free ဆိုတာမှာ ကောင်းတာ၊ မကောင်းတာ ရော တာကတော့ မဆန်းပါလေ။
ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်ရင် လဲ Private Clinic တွေ၊ Private School တွေ ထားပေါ့။ ရွေးချယ်မှု တွေတော့ ရှိတာ မို့ ဆိုရှယ်လစ် ပုံစံ လို့တော့ ပြောမရဘူး။
အိုဘားမား တောင် မှ UK (NHS) က ကျန်းမာရေးစနစ် ကို အတုယူဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ မအောင်မြင်ဘူး။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံထဲ ချမ်းသာပြီးသူများ က ဆင်းရဲ သူများ နဲ့ တစ်တန်းထဲ ထား ဆက်ဆံခံရတော့ မှာ မကြိုက်ကြလို့ဘဲ။
ဒါကြောင့် အဲဒီလို လူတန်းစား မညီ ဖြစ်နေပြီး သား ဆိုရင် လူတန်းစားညှိလုပ်ရမှာ တွေ အတွက် ခက်ပါမယ်။
အခုလဲ ဟီလာရီ က ဆိုပြန်ပြီ။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ ဘီလျှံနာများ အတွက်တင်မဟုတ်။ အားလုံး အတွက် တဲ့။
တကယ်တော့ ပြောသာပြောရ။ နောက်က ပိုက်ဆံထောက်သူ သဘောတူ မှ ပြောလို့ ရမှာလေ။
. မြန်မာပြည် မှာ အခု အဲဒီ ကိစ္စကပိုပြီး အရေးကြီးနေတာကော။
NLD နောက်မှာ ဘယ်သူ တွေ ရပ်ပေးမှာလဲ ဆိုတာ အခု မထင်ရှားသေးဘူး။
ဒါကြောင့် အပြင် ကနေ သိပ်ပြီး အော် မနေကြဖို့ ပြောတာ။
ဟို … ကြောင်။
စိတ်ဝင်တစား ဝင်ဆွေးနွေး ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ ကိုမင်း ရေ။
ဒါထက် သမ္မတကြီး ရောနေကောင်းလား။
ကျွန်မ က နှုတ်ဆက် ပါတယ်လို့ ပြောပေးနော်။ :-)))))
ဒေါ်စုက သူ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေနိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ ကြေငြာပေးရမယ်ဆိုတာမှာ..
ဒါကပြတ်သားမြင်သာလာရင်.. ဒီချုပ်နောက်ကရပ်ရမလိုလို.. မဲသွားမထည့်တော့ဘူးဆိုနေသူတွေ.. တပ်မတော်သားတွေ.. ထင်ရှားပေါ်လာမှာပါ..
The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), commonly called the Affordable Care Act (ACA) or colloquially Obamacare, isaUnited States federal statute signed into law by President Barack Obama on March 23, 2010.
ဥရောပမှ မေ့မရနိုင်သော ပုံရိပ်တစ်ခု
EU ဥရောပသမဂ္ဂ က ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှာ ချီးမြင့်ထားတဲ့ Sakharov လူ့အခွင့်ရေးဆုကို ၂၂ အောက်တိုဘာလက
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့အသည်းစွဲ ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ လက်ခံရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဆုပေးပွဲ အခမ်းနားကို ဒိန်းမတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ ဆွစ်ဇာလန် စတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဗမာပြည်သားတွေလဲ (အစီစဉ် မပါခဲ့ပေမယ့်) တက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတန်း အပေါ်ဆုံးတန်းက ထိုင်ပြီး အားပေးခဲ့ရပါတယ်။
ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ကတော ဗမာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ အဲဒီပရိပ်သတ်ထဲ့ မှာ ရှိတယ်ဆိုတာ သူ မြင်တွေ့မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုရွှေတွေက ဇွဲမလျှော့ပဲ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူတွေကို နားပူနားဆာလုပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်နဲ့ တွေ့ခွင့်တောင်းကြပါလေရော။
သို့သော် တာဝန်ရှိသူတွေက ဒကာမကြီးဒေါ်စုနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးဘို့ အစီစဉ်မရှိကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ သူ့အစီစဉ်တွေနဲ့သူ ပြည့်နေကြောင်း ရှင်းပြသော်လဲ ကိုရွှေတို့ရဲ့ မလျှော့သော နားပူနားဆာလုပ်မူကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သူတို့ သွားရောက်ပြီး အကျိုးအကြောင်း ပြောကြရပါတော့တယ်။
အဲဒီအခါ ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ချက်ချင်းပဲ ဗမာပြည်သူတွေဆိုရင် သူတွေ့ချင်ပါတယ်လို့ ပြောတော့၊ လုံခြုံရေးတွေက ဦးဇင်းတို့ကို ၅မိနစ် ၁၀မိနစ်ခန့်တွေ့နိုင်ကြောင်း သူတို့က အချက်ပြတာနဲ့ ရပ်ကြလို့ ပြောပါတယ်။
အစီစဉ်မရှိတဲ့ တွေ့ဆုံပွဲမို့ ဘာထိုင်ခုံ ဘာစားပွဲမှ ခင်းမထားပါဘူး၊
ဒကာမကြီး သူ့ရဲ့ အစည်းဝေးခန်း၊ နားနေခန်း ကနေ အစောင့်အကြပ်တွေနဲ့ အခန်းပြင်ဘက်ထွက်အလာမှာ၊ လာတွေ့ကြတဲ့ ဗမာမိသားစုများက သီတင်ကျွတ်အခါ ကြုံနေတာမို့ အမေ့ကို ကန်တော့ချင်ပါတယ်၊ ဆုံးမသြဝါဒလေးလဲ ပြောပေးပါလို့တောင်းဆိုကြတော့၊
မဆိုင်းမတွ ဘာအခင်းမှ ခင်းမထားတဲ့ လူသွားလမ်း ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး၊
“အားလုံးထိုင်ကြ ဒို့ ဦးဇင်းတွေကို အရင် ကန်တော့ကြရအောင်”
ဆိုပြီး ဦးဇင်းတို့ကို ရိုကျိုးစွာ ပုဆစ်တုပ်ပြီး ကန်တော့ပါတော့တယ်။
အဲဒီ အချိန် အနားမှာရပ်နေကြတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေ အစောင့်အကြပ်တွေဟာ တွေဝေပြီးသွားပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေက
“ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအသွင်ကို ဆောင်နေပါတော့တယ်၊
ကမ္ဘာကျော်ကြီး၊ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေက လေးစားတဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင်ကြီးက ဘာအခင်းမှ မရှိတဲ့၊ လူတိုင်းဖိနပ်နဲ့ နင်းဖြတ်လျှောက်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်ကြီးပေါ်ကို ထိုင်လိုက်ပြီ၊
ပြီးတော့ ဘယ်ကမှန်း မသိတဲ့၊ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့၊ ဘယ်သူမှ မသိတဲ့ အညတြ ဘုန်းကြီး နှစ်ပါးကို လက်အုပ်ချီပြီး ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ရှိခိုး ကန်တော့နေတဲ့ ဟန်ဟာ အနားမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားသား တာဝန်ရှိသူ အစောင့်အကြပ်တွေ အပြင်က လာတွေ့သူဟာ ဗမာမိသားစုတွေကိုပါ အံ့သြစေခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်း မာန် မာနကို ချိုးနှိမ်ပြီး ဥာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆုရှင် ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတဲ့ ပဲတင်ထပ်သံတွေဟာ သူ့အလိုလို မြည်ဟီးနေပါတော့တယ်။
ကန်တော့ပြီးတဲ့အခါ ဗမာမိသားစုတွေနဲ ရင်းရင်နှီးနှီး “ရန်ဖြစ်ကြသေးသလား၊ စကားများကြသေးသလား” လို့မေးပြန်ပါတယ်။
အဲဒီ အခါ လာကြတဲ့ ဗမာမိသားစုများက “ စကားတော့ များကြပါတယ် အမေ တခါတရံပေါ” လို့ ပြန်ဖြေကြတော။
“အေး ဒါမှ ဗမာပြီသမှာ” ဆိုပြီး
ပြောတာကြောင့် အားလုံးရယ်ရယ် မောမော ရွင်လန်းသွားကြပါတော့တယ်။
“ကိုယ့်နိုင်ငံကို မမေ့ကြနဲ့၊ စွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်က တတ်နိုင်သလောက်ကူညီကြ” ဆိုပြီး
သြော်… နောက်ဆုံးတောလဲ မြတ်သော မနော၊ မြတ်သော မနော။
အကြင်နာ၊ စာနာ၊ စေတနာ စိတ်ထားနဲ့ နိုဘယ်လ် ငြိမ်ချမ်းရေးဆုရှင် ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ မာန်မာန ကင်းစင်တဲ့ စင်စစ် တည်ငြိမ် ငြိမ်းချမ်းသော ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ပါလား ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရခဲ့ပုံကို အမှတ်ရနေမိပါတော့တယ်။
ဗမာပြည်သူ ပြည်သားများ အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ခေါင်းဆောင်ကို တန်ဘိုးထားနိုင်ကြပါစေ။
ကိုယ်တိုင်ဆုံတွေ့ခွင့်ရသူတွေရဲ့ အပြုံးတွေ စကားသံတွေ ကြားရပြီး ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖူးချင်လှတယ်။
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက သူ့အပေါ် ခြေထိုး အကောက်ကြံ အပုပ်ချ တဲ့အပြင်
ကာယကံ ၀ဇီကံ မနောကံ နဲ့ အသက်အန္တရာယ်ပြုဖူးတဲ့လူတွေကိုတောင်
တိုင်းပြည်အတွက်ဆို အာဃာတ မထားဘဲ လက်တွဲအလုပ်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန် လမ်းကြောင်းပေါ်နေနေချိန်
သူ့ကို ချစ်လှချည်ရဲ့ လေးစားလှချည်ရဲ့ ထောက်ခံလှချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ နောက်လိုက်ဆိုသူတချို့နှယ့်
(သာမန်ပြည်သူအချင်းချင်းကြားမှာတောင်) သူတို့ ဘွားတော်ကို သုံးသပ် ဝေဖန်ရင် ၀ိရောဓိဖြစ်ရင် မေးခွန်းထုတ်ရင် Cat Cat လှန်
ဒါတောင် ၀ဇီကံ ကာယကံ မပါသေးဘူးနော်…. ပီစီ နဲ့ ရေးသမို့ ပီစီကံ ပြောမလား အင်တာနက်ပေါ်ကစာတွေမို့ ဆိုင်ဘာကံပြောမလား အဲ….
အညှိုးအတေး မရှိပါဘဲ … ဘလော့ရတာနဲ့ အန်ရတာနဲ့ မခေါ်မပြောဖြစ်ရတာနဲ့… အိုဘယ့် ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ပြည်ထောင်စု။
ဆဲလိုက် ဆိုလိုက် ကြိမ်းဝါးလိုက်တာများ… မအေ နှမ ကုတင်ပေါ်ဆွဲတင်တဲ့ စလုံးတွေတင်းကြမ်း။
ပုဆိုး နဲ့ ထမိန်အောက်က အရာတွေ မနေရတာလည်း ခနခန … ဥာဏ်ပညာ နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားလည်း ရိုးစွပ်ခံရတာ အကြိမ်ကြိမ်….
ခေါင်းဆောင်ကောင်း နောက်မှာ ဦးဆောင်သူကောင်း အောက်မှာ သူ့ အိုင်ဒီယော်လော်ဂျီ အတိုင်း ညီကြ လိုက်နာကြ စည်းလုံးကြတာပြောပါတယ်။
တခါက သူတို့ပဲ အော်ဖူးတဲ့ ဆဲဆိုမှုဖြင့် ဒီမိုကရေစီ မရနိုင် ဆိုတဲ့ စာသားကလေး စာအုပ်ထဲ ဘယ်သူ ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်သွားသလဲမသိ။
“မ” လေး တစ်လုံးထဲ ကို ဘဲ မြ ဖျက်လိုက် မိတာ ပါ ဆရာလေး ရယ်။
ဒီရွာထဲမှာ အရီးမြ နှစ်ယောက်မလိုဘူး။
အခုတစ်ယောက်ထဲနဲ့ ရွာသူ့တာဝန် ကျေနေပြီ
မျက်နှာစာအုပ်ပေါ်ကနေဘဲ Copy ယူဖြည့်နေကြတော့ ရွာ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်တွေ လျော့သွားသဗျ။
အနီးကပ်ဆုံးရန်သူကို အရင်ချေမှုန်းဘို့အတွက် လာမယ့် လုပ်ဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD တခုထည်းကိုဘဲ ပုံအောပေးပစ်လိုက်စေချင်တယ်။
သာမှ အစိတ်သားကို ဖိလို့ရမှာ။ ကျန်တာ နောက်တဆင့်မှ စဉ်းစားကြယုံ။
အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ၁၉၉၀ ပြီးကတည်းက US UK Training တွေပေးထားတာတွေ
NLD မှာ ရှိနေသယ်ခင်ဗျ။ စစ်အစိုးရ ကို မယုံသင့်လို့ ကိုယ်ဖျောက်ထားထားတုံးလို့ မြင်နေမိတယ်။
ကိုနေတိုးဆီ ရီပို့ တက်လိုက်ယုံ